सेयर बजारभित्रको खेल बुझ्न चाहनुहुन्छ ? यी ५ चलचित्र हेर्नुहोस् – Clickmandu
सेयर बजारभित्रको खेल बुझ्न चाहनुहुन्छ ? यी ५ चलचित्र हेर्नुहोस्
क्लिकमान्डु २०७६ पुष १३ गते १४:१३ मा प्रकाशित
सेयर बजारको खेलाडी हुनुहुन्छ ? वा सेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ वा रुचि नै छ भने पनि तपाईका लागि त्यसभित्रको खेल बुझ्नका लागि चलचित्र सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छन् ।
जसमा बलिउड र हलिउड दुबै क्षेत्रका चलचिलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ । आज हामी सेयर बजार, यसभित्रको खेल कसरी खेलिन्छ र त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने विषयमा बनाइएका केही चलचित्रका बारेमा जानकारी दिँदैछौं ।
बलिउडमा बनेको चलचित्रमध्ये ‘गफ्ला’ पनि एक हो । ४ हजार २५ करोड रुपैयाँको घोटलाको विषयमा बनाइएको थियो । जसलाई हर्सल मेहताले वास्तविक जीवनमा घटना गराएका थिए । सोही घटनालाई आधारित बनाएको बनाइएको गफ्ला चलचित्रमा कसरी सानो सहरबाट आएको एक युवक जसलाई जीवनमा निकै कम अवसरहरु पाएको छ ऊ कसरी ठूलो खेलाडी बन्यो र कसरी अवसान भयो भन्ने विषय उतारिएको छ । जसको मुख्य सन्देश आफ्नो सबै सम्पत्ति कहिले सेयरमा नलगाउनु होस भन्ने दिएको छ ।
नबिल बैंकले घर बनाउन ७.९९ प्रतिशत ऋण दिने
राष्ट्र बैंकलाई संसदको सुझावः क्रश होल्डिङ भएका बैंकलाई बिग मर्जर गराउनू